That's so good, right?: March 2013
ကျားအင်္ဂါ ကြီးစေခြင်း (၂) (အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၇၂))
ကျားအင်္ဂါ ကြီးစေခြင်း ယေဘုယျနည်းတွေ (၁) မှာ ရေးခဲ့ပါတယ်။ မေးလာတာရှိလို့ နည်းတနည်းကို ဆေးပညာ ရှုဒေါင့်က ရေးပါ့မယ်။ Injection of liquid silicone into the penis and the scrotum ကျားလိင်အင်္ဂါ (လိင်တံ နဲ့ ကပ်ပယ်အိတ်) ထဲကို (စီလီကွန်) ဆေးထိုးပေးနည်း ဖြစ်တယ်။
ဒီနည်းရဲ့ထူးခြားမှုက အလျင်အမြန် သိသာစေနိုင်တဲ့နည်း ဖြစ်ပေမဲ့ လူကြိုက်များလှတော့ မဟုတ်ဘူး။ သိသာမှာက Girth လုံးပတ် တိုးလာတာ ဖြစ်တယ်။ Shaft အရှည်ကို တိုးတာ မဟုတ်ဘူး။ အများစုကတော့ ၉ဝ% တိုးစေကြတယ်။ သိပ် ထူးခြားချင်သူတချို့က Penis volume ထုထည် ၉ဝဝ% တိုးစေအောင်အထိ စံချိန်တင်ထားတယ်လို့ ဖတ်ရပါတယ်။
• လိုတာ မရောက်ဘဲ (ကန်တော့ပါ) “သေးပေါက်တာသာ ထူးစေပါသတဲ့”။
• Inflammation ရောင်ရမ်းတာနဲ့ Discoloration ဆေးထိုးရာ နေရာတဝှိုက် အရောင် ပြောင်းလဲသွားမယ်။
Penis enlargement (1) ကျားအင်္ဂါ ကြီးစေခြင်း (၁) http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/04/penis-enlargement-1.html
Penis enlargement (3) ကျားအင်္ဂါ ကြီးစေခြင်း (၃) http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/04/penis-enlargement-3.html
Penis enlargement (4) ကျားအင်္ဂါ ကြီးစေခြင်း (၄) http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/05/penis-enlargement-4.html
Penis Pump ကျားအင်္ဂါသုံး ကရိယာတွေ http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/04/penis-pump.html
သြစတြေးလျ တောကျတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ရဲ့ တစ်ခုသောဆေးရုံရှိ အခန်းငယ်တစ်ခုပိုင် ပြတင်းပေါက်ဘေးနားက ခုတင်ပေါ်မှတစ်ဆင့် ကျွန်တော် နေ၀င်ချိန်ကို… နေလုံးကြီးငုံ့လျှိုးသွားတာကို ထိုင်ကြည့်နေမိပါတယ်။ စစ်မှု့ထမ်းရင်း oversea training နဲ့ပါလာစဉ် ခြေ ထောက်မှာ ဒဏ်ရာရခြင်းကြောင့် အနားယူနေရခြင်းပါ။ ကျွန်တော် သူနာပြုဆရာမလေး အကူအညီနဲ့ အပြင်ကိုလမ်းထွက် လျှောက် ပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ ချိုင်းထောက်ကြီးနဲ့ သူနာပြုဆရာမလေးကို အဖော်ပြုရင်း လမ်းဘေးတလျှောက် သဘာဝရှုခင်းတွေ ကိုကြည့်ရင်း လျှောက်လာလိုက်တာ သတိပြုမိရတာက ဒီမြို့ကလေးရဲ့ ရှုခင်းတွေက သိပ်ကိုလှပနေတာပါပဲ။ လျှောက်လာတဲ့ခဏ မိုးစက်လေးတွေ ကောင်းကင်ပြင်က တဖွဲဖွဲကျလာတယ်။ သူနာပြုဆရာမလေးခမျာ စိတ်ပူစပြုသွားတယ်ထင်ပါရဲ့။ နေကောင်းကာစ လူနာတစ်ယောက် အနေနဲ့ မိုးရေထဲ လမ်းမလျှောက်သင့်တာအမှန်ပဲ မဟုတ်လား။ သူမက ကားမှတ်တိုင်က ခုံကလေးတွေနားရောက်တော့ ကျွန်တော့်ကို ထိုင်ခိုင်းထားခဲ့ပြီး သူမက ဆေးရုံဘက်ကကို ကားယူဖို့ ခပ်သွက်သွက်ပြန်သွားတယ်။ အချိန်က ညနေ ၆နာရီခွဲလောက်ရှိနေပြီဆိုပေမဲ့ မိုးအုံ့နေတာကြောင့် မှောင်လုနီးနီးဖြစ်နေပြီ။
ဟိုး….ညို့နေတဲ့မိုး တဖွဲဖွဲကျနေတဲ့မိုးက သဲကြီးမဲကြီးရွာချလာတယ်။ ရွာနေတဲ့မိုးတွေကို အမှတ်တမဲ့ ငေးကြည့်နေမိပါရဲ့။ ချိုင်းထောက် ကြီးကို နံဘေးမှာချ ခုံလေးမှာ ခပ်လျော့လျော့ထိုင်ရင်း ဆရာမလေးမသိအောင် ထည့်လာတဲ့ စီးကရက်ကိုထုတ်ကာ အားရပါးရ ဖွာရှိုက် နေမိပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ “ ကျွန်တော့်ကို စီးကရက်တစ်လိပ်လောက်ပေးနိုင်မလား ခင်ဗျာ” ဆိုပြီး ရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့အသံကြောင့် ကျွန်တော့်ဘေးကိုကြည့်လိုက်တယ်။ မိုးတွေစိုရွှဲနေတဲ့ ကျွန်တော့်အရွယ် ၂၃နှစ်ဝန်းကျင်လောက် ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်။ နှာတံပေါ်ပေါ် ဆံနွယ်ကွေးကောက်ကောက်လေးတွေမှာ မိုးရေစက်တွေ တွဲလဲခိုလို့။ ကောလိပ်ကျောင်းသားဝတ်စုံနဲ့ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း စီးကရက် ဘူးကိုကမ်းပေးလိုက်တယ်။ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေ တွန့်ကွေးသွားရင်းပြုံးလိုက်တော့ ပါးချိုင့်လေးတွေက နှစ်လိုစွာပေါ်လာပါရော။
ကျွန်တော်အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံရရင် မနာလိုဘူးသူ့ကို။ ကျွန်တော့်မှာ သူ့လိုဖြူစင်တဲ့အပြုံးမျိုး ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ဘူးလို့။ သူက စီးကရက်ကို နှုတ်ခမ်းဖျားမှာတေ့လိုက်တော့ ကျွန်တော်က မီးခြစ်ကို ခြစ်ပြီး မီးညှိပေးလိုက်တယ်။ ထူးဆန်းတာက သူ့ရဲ့ စီးကရက်က လုံးဝ မီးမစွဲဘူး။ ကျွန်တော် နောက်တစ်ကြိမ် မီးခြစ်ကိုခြစ်ပြီး မီးညှိပေးဖို့ကြိုးစားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီတစ်ခါလည်း မီးမစွဲပြန်ဘူး။ သူ့ရဲ့ မျက်နှာက ညှိုးကျသွားတယ်။ ကျွန်တော်လည်း စိတ်ရှုပ်ရှုပ်နဲ့ ကျွန်တော်သောက်နေဆဲ စီးကရက်ကို သူ့အားပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မျက်လုံးလေးတွေက အရောင်တောက်လာပြီး နှုတ်ခမ်းဖျားလေးတွေက ပြုံးရောင်သန်းသွားပါရဲ့။ သူက စီးကရက်ကိုလှမ်းအယူမှာ လက်ချောင်းချင်းတွေ့ထိသွားတော့ သူ့ရဲ့လက်တွေက အရမ်းအေးစက်နေတယ်ဗျ။ “မင်းရဲ့လက်တွေ အရမ်းအေးစက်နေတာပဲ” လို့ ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တော့ သူက ခင်ဗျားရဲ့လက်တွေကလည်း အရမ်းအေးစက်နေတဲ့လက်တွေထဲမှာ ပါပါတယ်တဲ့။ ကျွန်တော့်မှာ ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်လိုက်မိသည်ပေါ့။
သူက “ကျွန်တော့်နာမည် အေသင်ပါ” ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကို နှုတ်ဆက်လက်ဆွဲဖို့ လက်ဆန့်တန်းပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်က တကာရှီပါလို့ပြောရင်း အလိုက်သင့်လက်ပြန်ကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရင်း သူက “ ကျွန်တော့်ရဲ့ လက်တွေကလေ အရင်ကအရမ်းနွေးထွေးခဲ့ဖူးတယ်၊ ပြီးတော့ အရင်က လက်တွေအမြဲအေးစက်နေတတ်တဲ့ ချစ်သူရှိခဲ့ဖူးတယ်”တဲ့။ ကျွန်တော်က ရွာနေတဲ့မိုးတွေကိုငေးကြည့်ရင်း “အဆင်ပြေသွားမှာပါ”လို့ သူ့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ သူက သူ့ချစ်သူအဆင်ပြေ နေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်တဲ့ပြောပြန်တယ်။ အဲ့ဒီနောက် သူ့ရဲ့လက်က ကျွန်တော့်သောက်လက်စ စီးကရက်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့ မီးသေနေတယ်။ ကျွန်တော်လည်း စိတ်လေသွားရပေါ့။ သူက “ကျွန်တော်တစ်ခုတောင်းဆိုလို့ရမလား ခင်ဗျာ”တဲ့။ ကျွန်တော်က “ပြောကြည့်လေ” လို့ ပြောလိုက်တယ်။ “ကျွန်တော့်ဘက်ကို စီးကရက်ငွေ့တွေ မှုတ်ထုတ်လိုက်ပါလား” ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကြည့်ပြီး အားရပါးရရယ်မိလိုက်ကြတယ်။ “အိုကေကွာ” လို့ပြောပြီး ရူးကြောင်ကြောင်လုပ်ရပ်ပေမဲ့ ဆေးလိပ်သောက်သူအချင်းချင်း စာနာစိတ်နဲ့ ကူညီဖို့သဘောတူလိုက်တယ်။ သူက ခပ်ပါးပါးမှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ စီးကရက်ငွေ့တွေကို မက်မက်မောမော ရှူရှိုက်လိုက်ပါတယ်။
အချိန်နည်းနည်းကြာ စီးကရက်တစ်လိပ်ကုန်သွားတော့ ရွာနေဆဲမိုးတွေကိုကြည့်ပြီး သူကပြောတယ် “တာကာသိလား အချစ်စစ်ဆိုတာ မင်းကိုမင်းသတ်သေဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲ”လို့။ ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှ နားမလည်ဘူး။ အထူးသဖြင့် အချစ်ဆိုတာကို ကျွန်တော် မသိဘူး။ ကျွန်တော်ပြုံးလိုက်မိတယ်။ သူ့မျက်လုံးလေးတွေက အရောင်တောက်ပလာပြီး အားရပါးရနဲ့ ဆက်ပြောတယ် “ဟုတ်တယ် အရင်က ကျွန်တော့်မှာ အရမ်းချစ်ရတဲ့ချစ်သူရှိတယ်”တဲ့။ ကျွန်တော်က “မင်းချစ်သူကံကောင်းမှာပါ”လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ခဏလေး တွေ့ရတဲ့ အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ ကျွန်တော့်လို သူစိမ်းတစ်ယောက်ကတောင် ခင်မင်နှစ်လိုစိတ်ဝင်ခဲ့တာပဲဟာ။ သူ့မျက်နှာလေး ညှိုးကျသွားရင်း “ကျွန်တော်ချစ်တာ သူမက လုံးဝမသိဘူး” “ကျွန်တော်က သူ့ရဲ့အနားမှာနေရရင်ကို ပျော်နေတဲ့သူ တစ်ခါတလေဆိုရင် သူ့ချစ်သူနဲ့တွေ့ဖို့ ကျွန်တော်ကပဲ သူ့အိမ်ကနေခေါ်ထုတ်ပေးရတယ်” တဲ့စကားဆက်တယ်။ ကျွန်တော့်မှာ ပြောစရာစကားလုံးတွေ ဆွံ့အသွားရပါတယ်။ “တကယ်တော့ အချစ်က တကယ်ချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ချစ်နေရရင်ပြီးပါတယ်” ကျွန်တော် သူ့ကို တိုးတိုးလေးပဲစကားတုန့်ပြန်လိုက်ရတာက “အချစ်ဆိုတာ ကျွန်တော့်အတွက် သိပ်နားလည်ဖို့ ခက်ခဲနေသလိုပဲ” လို့။ အပြင်မှာ မိုးတွေက ပိုပြီး သည်းသည်းမည်းမည်းရွာလာတယ်။
သူက စကားဆက်တယ် “သူမကလည်း သူမရဲ့ချစ်သူကိုသိပ်ချစ်တယ်”
“အဲ့ဒါကပဲ ကျွန်တော့်အတွက် အချစ်စစ်ဆိုတာအတွက် ကိုယ့်ဟာကို သတ်သေဖို့အကောင်းဆုံးအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သွားတယ်”
“ကျွန်တော်တို့ ကောလိပ်ကအပြန်မှာပေါ့ စက်ဘီးတွေစီးလာကြရင်းနဲ့ လမ်းအကွေ့မှာ ကုန်ကားကြီးတစ်စီးက ရုတ်တရက်ကွေ့ လာတော့ ကယ်တင်ရင်းနဲ့ ကားတိုက်ခံလိုက်ရပြီး သေသွားတယ်ခင်ဗျ”
ကျွန်တော် သူ့ရဲ့မျက်နှာကို အလန့်တကြားနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ သူ့ရဲ့မျက်နှာက သက်ရှိတစ်ယောက်လိုသွေးရောင်မရှိ သွေးဆုတ် ဖြူရော်နေပြီး ၀တ်ထားတဲ့အပြာရင့်ရောင် ကုတ်အကျ င်္ီမှအနီကွက်တွေနဲ့ စွန်းနေကြောင်း သေချာကြည့်မှ သတိထားမိသွားတယ်။ သူက ရှိုက်ကြီးတငှင်နဲ့ ကလေးတစ်ယောက်လိုငိုချတော့တာ။ ကျွန်တော့်စိတ်မှာ ကြောက်စိတ်မ၀င်သလို ကြောက်လည်းမကြောက်မိ။သူ့ကို တွေးရခက်စွာ သနားသွားတယ်။ သူ့ရဲ့ပခုံးလေးကို ငြင်သာစွာပုတ်လိုက်ပြီး နှစ်သိမ့်ပေးလိုက်တယ်လေ။ သူ့ဆီက အေးစက်နေတဲ့ အငွေ့အသက်ကို ခံစားရပြီးတဲ့နောက် သူဟာ လူစင်စစ်တစ်ယောက်မဖြစ်နိုင်မှန်း နားလည်သွားပါတယ်။ “ဟုတ်ပြီ အေသင် မင်းရဲ့ချစ်သူ ကို ကယ်ရင်းနဲ့ မင်းသေဆုံးခဲ့တာပေါ့”လို့မေးလိုက်တယ်။ သူက ငိုနေရာကနေ ကျွန်တော့်ကိုကြည့်ပြီး “မဟုတ်ဘူး သူမရဲ့ ချစ်သူကို တွန်းထုတ်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော် ကိုယ့်ဟာကိုယ်သေဆုံးဖို့ ရွေးချယ်လိုက်တာပါ”လို့ဖြေတယ်။ ကျွန်တော် ဆွံ့အငြိမ်သက် သွားရတယ်။ သူက တိုးရှအက်ကွဲနေတဲ့ အသံနဲ့ “ကျွန်တော် သူမကိုအရမ်းချစ်သလို သူမရဲ့ချစ်သူကိုလည်း သူမက အရမ်းချစ် တယ် လေ” “သူမ မရှိရင် ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရက်နဲ့သေဆုံးသလိုခံစားမှာမျိုး သူမကို မခံစားစေချင်ဘူး၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် နောင်တမရ ခဲ့ပါဘူးဗျာ”ပြောပြန်တယ်။ ကျွန်တော် သူ့ရဲ့အေးစက်နေတဲ့လက်တွေကို တလေးတစားနဲ့ ဆုပ်ကိုင်ဖျစ်ညှစ်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန် မှာပဲ အဝေးကနေ မောင်းလာတဲ့ ကုန်ကားကြီးတစ်စီးရဲ့ မီးရောင်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။
အေသင်က ကျွန်တော့်ကိုကြည့်ပြီး “ကျွန်တော်သွားတော့မယ်နော် ခင်ဗျားရဲက စီးကရက်ငွေ့တွေအတွက် ကျေးဇူးတင်နေမှာပါ” တဲ့။ ကျွန်တော်က မင်းဘယ်သွားမလို့လဲလို့မေးတော့ သူက အေးစက်စွာရှိနေရာက ပါးချိုင့်လေးတွေပေါ်အောင်ပြုံးလိုက်တယ်။ “ကိုယ့် ဟာကိုယ် သတ်သေဖို့ ရွေးချယ်တဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ နေ့တိုင်း အဲ့ဒီအချိန်ရောက်ရင် ဒီလိုပဲ ထပ်ခါတလည်းလည်း နာကျင်စွာ သေဆုံးရတယ်” ကုန်ကားကြီးရဲ့ မီးရောင်က တဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာတယ်။ “ခင်ဗျားရဲ့လက်တွေကိုနွေးထွေးအောင် လက်အိပ်တစ်စုံ တော့ဆောင်ထားဖို့မမေ့နဲ့”လို့ မှာရင်း ကုန်ကားကြီးဆီပြေးထွက်သွားပါတယ်။ “အေသင်” ကျွန်တော်အော်ခေါ်လိုက်သော်လည်း သူ မကြားတော့ပါ။ မိုးတွေက ပိုသည်းလာခြင်းလား ကျွန်တော့်မျက်လုံးက မျက်ရည်တွေကြောင့်လား အရာရာကေ၀၀ါးသွားတယ်။ ဆေးရုံက ကားလေး ကျွန်တော့်ရှေ့ဆိုက်ရောက်လာတယ်။ ပြီးတော့ စိုးရိမ်စွာနဲ့ ဆင်းလာသော သူနာပြုဆရာမလေး.....
နောက်တစ်ပါတ်ခန့်ကြာသောအခါ ကျွန်တော်ဆေးရုံကနေ ဆင်းခွင့်ရချိန် သူနာပြုဆရာမလေးကို ဒီမြို့ကလေးရဲ့ သချုင်္ံင်းကိုလိုက်ပို့ ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ သူမက ပင်ကိုယ်ခင်မင်ရင်းစွဲလည်းရှိတော့ သူမနဲ့ သူမရဲ့အမျိုးသားစစ်ဗိုလ်တို့ လိုလိုလားလားပဲလိုက် ပို့ကြပါတယ်။ သချုင်္ံင်းရောက်တော့ သူမရဲ့အမျိုးသားက ကားနားမှာစောင့်နေခဲ့ပြီး သူမကစိတ်မချနိုင်စွာလိုက်ပို့ပါတယ်။ သချုင်္ံင်းသာဆို တာ စနစ်တကျစောင့်ရှောက်မှုကြောင့် ပန်းခြံတစ်ခုနှင့်ပင်တူသည်လေ။ ကျွန်တော်က အေသင်ရဲ့ အုတ်ဂူရှေ့တွင်ရပ်လိုက်တော့ သူနာပြု ဆရာမလေးက ကျွန်တော့်ကိုစူးစိုက်ကြည့်တော့သည်။ သိုးမွှေးလက်အိပ်ကို ချွတ်ပြီး အေသင့်အုတ်ဂူလေးအပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်ပါ တယ်။ “ကိုယ့်မှာအပိုတစ်စုံရှိတယ်” လို့တိုးတိုးလေးပြောမိတာပေါ့။ ပြီးတော့ စီးကရက်ကို ထုတ် မီးငြိကာ ဖွာရှိုက်ပြီးနောက် သူ့ရဲ့ အုတ်ဂူဆီကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲက မှုတ်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီအချိန် နောက်ပါးစီက သူနာပြုဆရာမလေးရဲ့ငိုရှိုက်သံလေးကို ကြားလိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်က ကြည့်လိုက်တော့ သူမ ခပ်တိုးတိုးလေးပြောလိုက်တာ “အေသင်က ကျွန်မရဲ့အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းပါ” တဲ့။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ခပ်လှမ်းလှမ်းက ဘုရားကျောင်းရဲ့ခေါင်းလောင်းထိုးသံကို ကြားလိုက်ရပါတယ်။
ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျား ပြောစရာ စကားလုံးတွေ ဆွံ့အနေခဲ့ပြန်ပါပေါ့။
Posted by Alex Aung at 12:31 PM No comments:
လူဆိုတဲ့အမျိုးက ဘဝကိုဘယ်တော့မှ တစ်ယောက်ထဲရပ်တည်သွားလို့မရပါဘူး။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာ တဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုဖေးကူးစောင့်ရှောက်မယ့်သူ၊ ကြုံဆုံသမျှ ဆင်းရဲချမ်းသာ ဒုက္ခသုက္ခမျိုးစုံကို မျှဝေခံစားပေးမယ့် သူအနားမှာ တစ်ယောက်တော့ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့သည်လို လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘဝကို စတင်လက်တွဲကြတော့မယ်ဆိုရင် လက်ထပ်ပွဲကျင်းပကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဟိုမိုတွေကတော့ လက်ထပ်ပွဲဆိုတာ အကြီးမားဆုံး အခက်အခဲကြီတစ်ခုလို့လဲပြောလို့ရပါတယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့ မကန့်ကွက်ကြဘူးဆိုရင်တောင် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ နောက်ပြီး လက်ထပ်ချင်းကို ကာကွယ်ပေးမယ့် ဥပဒေတွေက လိုအပ်နေပါသေးတယ်။ အချို့နိုင်ငံမှာ လိင်တူလက်ထပ်ချင်းကို တရားဝင်ခွင့်ပြုထားပြီး အဲ့ဒီအတွက် ဥပဒေတွေကို ရေးဆွဲပြဋ္ဌန်းထားပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လက်ထပ်လိုက်ခြင်း အားဖြင့် ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်သလဲဆိုတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ယုံကြည်မှုပိုရစေလာပါတယ်။ ကာမပိုင်ဆိုတာ ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ချစ်သူရည်းစားဘဝကလို အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ အမှားမျိုးလေးတွေကို ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ် ဆင်ခြင်နိုင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကွာရှင်းပြတ်စဲ ကြတော့မယ်ဆိုရင် သူ့ပိုင်ဆိုင်မှု ကိုယ့်ပိုင်ဆိုင်မှုကို တရားဥပဒေနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်။ ဒါကတော့ လက်ထပ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေပါ။
ဒါပေမယ့် ဒီလက်ထပ်ခြင်းကိစ္စကတော့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံက ဟိုမိုတွေအတွက် အိမ်မက်တစ်ခု လိုပဲဖြစ်နေပါတယ်။ အိမ်မက်ဆိုတာ အိပ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာပဲ ဖြစ်ခွင့်ရနိုင်ပြီး လက်တွေ့ဘဝမှ မရရှိနိုင်တာမျိုးပါ။ လိင်တူချစ်သူတွေကို မုန်းတီးကြောက်ရွံ့သူ(Homophobia ခေါ် Homophobic) တွေကလဲ ဒုနဲ့ဒေးရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစိုးရက တရားဝင်ခွင့်ပြုပေးမယ်ဆိုရင်တောင် အခြားနောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်တွေက မနည်းပါဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေက အရှက်အကြောက်ကြီးတယ် ဂုဏ်သိက္ခာကိုတန်ဖိုးထားကြတယ် ရှေးရိုးစွဲအယူအဆတွေကို ယနေ့ထိမပစ်ပယ်နိုင်ကြသေးတာရယ်ကြောင့် ဒီလက်ထပ်ဖို့ကိစ္စ ဆိုတာ ဟိုမိုတွေအတွက် မဟာအခက်အခဲကြီးဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ စွဲထင်နေတာက အခြောက်တို့ ဂန်ဒူးတို့ မိန်းမလျာတို့ ယောက်ျားလျာတို့ကို အတိတ်ဘဝက ဝဋ်ကံနာကြောင့် ဝဋ်လည်နေသူတွေအဖြစ်သာ မြင်တတ်ကြပါတယ်။ ဘာသာရေးအယူအဆနဲ့ မတွေးပဲ လူသားချင်းစာနာတဲ့ စိတ်နဲ့ သြော်သူတို့တွေဟာ လိင်စိတ်ပြောင်းလဲနေကြသူတွေပါလားဟူသော အတွေးမျိုးနဲ့ တွေးမိသူက ခပ်ရှားရှားပါပင်။ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံက ဟိုမိုတွေအတွက်တော့ လက်ထပ်တာ လက်မထပ်တာက အဓိကမကျတော့ပါဘူး။ အဓိကက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်နေဖို့ သစ္စာရှိဖို့နဲ့ ယုံကြည်မှုရှိနေဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်။
မုန့်ကိုပဲဝေစားမယ် အချစ်ကိုတော့ဝေမစားနိုင်ဘူး ဆိုသလိုပေါ့။ ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်ချစ်သူကို သဝန်တိုတာ သဘာဝပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သဝန်တိုတာကိုလဲ limit လေးတစ်ခုသတ်မှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဖက်က ချစ်လို့သဝန်တိုတာမှန်ပေမယ့် ကိုယ့်ချစ်သူအနေနဲ့ ငါ့ကိုတောင် မယုံကြည်တော့ဘူးလား ဆိုတဲ့ အမြင်မျိုး မြင်သွားတတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ သဝန်တိုချင်းရဲ့ အကျိုးဆက်တွေက မကြာခဏ ကတောက်ကဆ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကတောက်ကဆဖြစ်တာ များလာရင် စိတ်ကုန်သွား စိတ်ပျက်သွားတတ်ကြပါတယ်။ “မင်းကိုဒီလောက်နားလည်ရခက်နေရင် အစကတည်းက မချစ်ခဲ့ပါဘူး “ ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတွေ တွေးမိလာတတ်ကြပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ လူကြားသူကြားထဲ သဝန်တိုတဲ့ အမူအယာ မျိုးလုပ်တာတွေ ရှောင်ရှားရပါမယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူက ဆိုပါတော့ လူသိမခံဝံ့တဲ့သူ ဥပမာ စစ်ဗိုလ်တစ်ယောက် ပဲဆိုပါတော့။ ကိုယ့်ရှေ့မှာ မိန်းကလေးတွေနဲ့ စနောက်နေတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် အခြားသဝန်တိုစရာ တစ်ခုခု လုပ်နေတာမျိုး ကြုံတွေ့ခဲ့ရင်လဲ လူကြားသူကြားထဲမှာ ကိုယ့်အနေနဲ့ ဘာမှမဖြစ်သလိုနေနိုင်ရပါမယ်။ မနေနိုင်သေးဘူးဆိုရင်လဲ နေနိုင်အောင်ကျိုးစားဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ နေရဒေသမတူချင်းဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကိုတပ်ရသလဲ ဆိုတော့ နေရာဒေသမတူချင်းကလဲ အဓိကပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်နေတတ်လို့ပါပဲ။ ဟိုမိုအများစုဟာ အပြင်ကနေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သိကျွမ်းပြီး ချစ်သူဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုတာ ရာခိုင်နှုန်းနည်းပါတယ်။ များသောအားဖြင့် online ကနေ chat ရင်း date လုပ်ကြပြီး အဆင်ပြေသွားတတ်ကြတာပါ။ အဲ့ဒီအခါမှကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်ချစ်တဲ့သူက နေရာဒေသချင်း မတူတဲ့ အခါအကြီးအကျယ်စိတ်ညစ်လာရပါတယ်။ ဥပမာ ကိုယ်ကရန်ကုန်မှာနေတယ် ကိုယ့်ချစ်သူက နယ်မှာနေတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်မိသွားကြပြီး နောက်ဆုံးတော့ date လုပ်ကြတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ဒေသကိုယ် ပြန်လာတယ်။ ကိုယ်ကလဲ ကိုယ့်ချစ်သူနေတဲ့ဒေသမှာ မနေနိုင် ကိုယ့်ချစ်သူကလဲ ကိုယ့်ဆီမှာ လိုက်မနေနိုင်နဲ့ နေရာဒေသကလဲ အရမ်းစကားပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုယ်နဲ့ဝေးတဲ့သူဆိုရင် မစဉ်းစားတာကောင်းပါတယ်။
ဒါကတော့ အကြီးမားဆုံး အန္တာရယ်ရှိတဲ့ကိစ္စပါပဲ။ ကိုယ်ဟာဟိုမိုတစ်ယောက် ကိုယ့်မှာ လိင်တူချစ်သူတစ်ယောက် ရှိနေပြီဆိုတဲ့ကိစ္စကို မိဘတွေ သိသွားခဲ့ရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ??? ဒါကတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ သိချင်နေတဲ့ကိစ္စ တစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလဲ မိဘတွေကို အသိပေးလို့ မဖြစ်တဲ့အခြေအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဘယ်မိဘမဆို ကိုယ်မွေးထားတဲ့ သားသမီးက ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ရင်ထုမနာဖြစ်ကြမှာပါပဲ။ မတော်လို့သိသွားရင် ဒေါသထွက်ပြီး အရိုက်ခံရနိုင်သလို အိမ်ပေါ်ကလဲ မောင်းချခံရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ သားသမီးမျိုးကို နားလည်ပေးနိုင်တဲ့ မိဘဆိုတာ ခပ်ရှားရှားပါပဲ။ နောက်ပြီး ပညာမတတ်တဲ့ ရိုးလွန်းအလွန်း ရှေးရိုးစွဲအယူရှိတဲ့မိဘတွေဆိုရင်ပိုဆိုးပါ လိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ကတော့ မိဘတွေကို ဖွင့်ပြောမလား ဇွဲကြိုးချပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေမလားဆိုရင် ဒုတိယဟာကိုပဲ ရွေးလိုက်ပါတော့မယ်။
ကိုယ့်ကို ဟိုမိုတစ်ယောက်မှန်း ပတ်ဝန်းကျင်ကဖြစ်စေ ကိုယ်နဲ့ရင်းနီးတဲ့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်း ဥပမာ သူငယ်ချင်း တွေကဖြစ်စေ သိသွားခဲ့ရင် အနည်းဆုံးတော့ အစအနောက်ခံရနိုင်ပါတယ်။ တမင်တကာ ပျော်စေပျက်စေ နောက်တာစတာမျိုးကို သည်းညည်းခံနိုင်ကြပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ချိုးနှိမ့်ပုတ်ချ ပြီးနောက်ပြောင်တာမျိုးကိုတော့ ကိုယ့်အနေနဲ့ သည်းညည်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့သည်လိုမျိုးတွေ ကြုံလာတဲ့အခါ ဘယ်လိုရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းကြမလဲ။ ဒါကလဲ ပြဿနာတစ်ခုပါပဲ။ ခက်သည်က လူတွေက ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး သူများအကြောင်းမပြောရင် မနေတတ်ကြတဲ့သူတွေအများသားဆိုတော့ ဒီကိစ္စကလဲ ပြဿနာတစ်ခု အဖြစ် အကျုံးဝင်လာခဲ့သည်ဆိုပါစို့။ အဲ့လိုပြဿနာမျိုးကြုံကြိုက်လာတဲ့အခါ ဥပမာ ကိုယ့်ကိုလူတစ်ယောက်က အခြောက်တွေဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး စလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ချစ်သူ တွဲသွားတာကို အခြောက်တွေအချင်းချင်းကြိုက်ကြတယ် ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး စော်ကားထိခိုက် လာရင် ကိုယ့်ဖက်က တုန့်ပြန်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဟိုမိုနဲ့ဆိုင်တဲ့ အသိပညာ ဗဟုသုတတွေ လေ့လာထားရပါတယ်။ ဒါမှကိုယ့်ကိုသူများပြောရင် ကိုယ်ကလဲ ပြန်ပြောနိုင်မှာပေါ့။ နို့မဟုတ်ရင် သူများဘာပြောပြော ကိုယ်ကဘာမှပြန်မပြောတတ်ပဲ ကြက်ကြီးလည်လိမ်ထားသလို အီလည်လည်နဲ့ ခံနေရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုနာအောင်ပြောတဲ့သူတွေကို အနည်းဆုံးတော့ အသိတရားတစ်ခု ရသွားအောင် ပြန်ပြောနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါ ဒါမှ နောက်မစရဲတောမှာလေ။
ကျန်မာရေးပြဿနာနဲ့ပက်သက်ပြီး မိမိကိုယ်ကို ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်။ တစ်ခုသိထားရမှာက လိင်တူဆက်ဆံခြင်းက လိင်ကွဲဆက်ဆံခြင်းထက် HIV ကူးစက်ခံရဖို့ အခွင့်အရေး 99.99% ပိုရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စအိုဆိုတာ သဘာဝက လိင်ဆက်ဆံဖို့ ဖန်တီးပေးထားတဲ့ နေရာ မဟုတ်ပါဘူး။ စအိုရဲ့ အတွင်းပိုင်း အသားအရေပြားအမြှေးပါးလေးတွေဟာ အလွန်အင်မတန်မှ နူးညံ့ပြီး ပါးလွှာပါတယ်။ ဒါကြောင့် လိင်တံနဲ့ထိုးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှ အရေပြားတွေဟာ အလွယ်တကူနဲ့ ပွန်းပဲ့သွား နိုင်ပြီး ရောဂါကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် HIV ဆိုသည့် ရောဂါပိုးက ဟိုမိုတွေ straight တွေမခွဲခြားပါဘူး။ လိင်တူဆက်ဆံတာမှ မဟုတ်ပါဘူး လိင်ကွဲဆက်ဆံရင်လဲကူးတာပါပဲ။ ဟိုမိုချင်းလိင်ဆက်ဆံပေမယ့် အကာအကွယ်သုံးတာနဲ့ လိင်ကွဲဆက်ဆက်ပြီး အကာအကွယ်မသုံးတာနဲ့ ဘယ်ဟာရောဂါပိုကူးစက်ခံရနိုင် သလဲဆိုတာ ယှဉ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ လိင်တူချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါ အဆင်မပြေနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာ တွေကိုတော့ မိမိဖာသာလေ့လာသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ ချောဆီမပါပဲ ဆက်ဆံတဲ့အခါ စအိုနာကျင်တာမျိုးတွေ၊ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တာမျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။
လိင်ဆက်ဆံပြီးသွားတဲ့အခါတိုင်းလဲ သုတ်ရည်ကို စအိုထဲမှာ မထွက်သွားစေဖို့ ဂရုစိုက်စေလိုပါတယ်။ ကွန်ဒုံးသုံးရင် ဒီကိစ္စက ပြဿနာမရှိပေမယ့် ကွန်ဒုံးမသုံးတဲ့ စုံတွဲတွေအတွက်ကတော့ ဒါက ပြဿနာတစ်ခုပါ။ စအိုထဲမှာ သုတ်ရည်ဝင်သွားရင် စအိုကိုမသန့်မရှင်းဖြစ်စေပါတယ်။ အိမ်သာသွားပြီးအလေးသွားတဲ့ အခါကျမှ မစင်တွေနဲ့ ရောပါလာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သုတ်ရည်ကို အပြင်ဖက်မှစွန့်တာ ကောင်းပါတယ်။ လိင်ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ အခြားပြဿနာများကို မိမိနှင့်နီးစပ်ရာ စာပေ နဲ့အခြား ဗဟုသုတ များကို လေ့လာစေလိုပါတယ်။ မိမိဟာ လိင်တူချစ်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်နေရင် ဒီပြဿနာတွေက တစ်နေ့မှာ မလွဲမသွေ ကြုံလာမှာပါ။ ဒါကြောင့် ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးနေလို့မရပါဘူး အဲ့လိုနေလိုက်ရင် တကယ်တမ်းကြုံ လာတဲ့အခါကျမှ ပြဿနာတတ်ပါလိမ့်မယ်။ ချစ်သူရည်စားရှိသူတွေအနေနဲ့လဲ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို အတက်နိုင်ဆုံး အဆင်ပြေအောင် ညှိယူစေလိုပါတယ်။ ဥပမာ တစ်နေ့ကို နှစ်ချီသုံးချီလုပ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးက မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါ။
Posted by Alex Aung at 7:58 PM 1 comment:
Penis enlargement (1) ကျားအင်္ဂါ ကြီးစေခြင်း
(၁) General ယေဘုယျ
ယောက်ျား တစ်ယောက် လိင်တံဟာ လိင် ဆက်ဆံဖို့အတွက် ဘယ်လောက် ရှိသင့်လဲ။ ပြည်ပြည်စုံစုံ ပြောပြပေးပါ။
Credit: Penis enlargement (1) ကျားအင်္ဂါ ကြီးစေခြင်း (၁) http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/04/penis-enlargement-1.html
Posted by Alex Aung at 11:00 PM No comments: